China 2020 mpanamboatra ambony 90% nidina feno kitapo fatoriana miaraka amina orinasa mpanamboatra vidiny mifaninana | Xueruisha
Raha mbola manahy momba ny fisafidianana kitapo fatoriana any ivelany ianao dia ity no safidinao tsara indrindra. Ity kitapo fatoriana renim-pianakaviana miloko marevaka ity dia fomba iray nohatsaraina mahazatra. Izy io dia mampiasa hakitroky stitch matevina. Ny elanelana misy eo amin'ny zaitra ambony sy ambany dia mihena tsikelikely. Ny famenoana dia zaraina mitovy amin'ny haben'ny ampahan'ny vatana, ka mahatonga ny fonosana tsara kokoa ho tsara kokoa. Izy io dia mitazona hafanana mahery ary koa mifanaraka amin'ny famolavolana ergonomika. Ny loko lehibe indrindra dia ny mainty ety ivelany ary mena ny ao anatiny, izay mahatohitra kokoa ny loto sy ny lamaody kokoa. Mazava ho azy, raha manana safidy hafa amin'ny lokon'ny kitapo fatoriana ianao, dia manome serivisy fanadioana loko ihany koa. Misy loko isan-karazany ny lamba azonao safidiana. Ny lamba ivelany ataontsika dia voatsabo amin'ny alikaola amin'ny rano sy amin'ny ranomaso, izay tena mora diovina ary azo diovina amin'ny famafana iray. Ny lamba manarona dia tsaboina amin'ny anti-lint, izay afaka mameno tsara ny famenoana anatiny. Ny famenoana ity kitapo fatoriana ity dia vita amin'ny ganagana fotsy avo lenta, miaraka amin'ny voninkazo avo lenta ary mitazona hafanana tena tsara. Namboarinay manokana ny lanjan'ny famenoana isan-karazany mba hahafeno ny fepetra takin'ny olona isan-karazany amin'ny mari-pana, na mikasa ny handeha hitoby ianao, hiakatra an-tendrombohitra, hiakarana an-tendrombohitra, hivezivezy bisikileta, hanjonoana na hitsangatsangana dia azo ampiasaina arakaraka ny fitaovana famenoana samihafa ary mifanaraka amin'ny maripana samihafa momba ny tontolo iainana. . Ity kitapo fatoriana ity dia manararaotra feno ireo toetran'ny fluffy any ambany ary mitaky toerana kely aorian'ny fitahirizana. Tsy haka toerana be loatra ao an-trano na ao am-poko izany, hanamora ny dianao. Manome serivisy namboarina be dia be izahay, toy ny fanontana LOGO, lamina, famenoana sns, na fanovana ny haben'ny kitapo fatoriana arak'izay takinao. Tongasoa ianao hanoro hevitra sy hanafatra.
Torohevitra hanatsarana ny mari-pana amin'ny tontolo iainana
Safidio ny endrika sy ny haben'ny kitapo fatorianao, safidio ny kitapo fatoriana nozazaina araka ny fihodinan'ny vatan'olombelona, ​​izay antsointsika hoe kitapo fatoriana endrika "Neny". Izy io dia manana fahombiazana tsara kokoa amin'ny famonosana, mampihena ny habaka mikoriana amin'ny rivotra, mba hanatsarana ny fihazonana hafanana, ary miaraka amin'izay dia mampihena ny lanjany, mba ho maivana ny fitaovana. Ankoatr'izay, rehefa misafidy kitapo fatoriana isika dia toy ny akanjo ihany No hisy habe lehibe sy salantsalany ary kely azo isafidianana, koa tokony misafidy ny kitaponao torimaso araka ny haavonao sy ny bikan'ny vatanao. Raha lehibe loatra ny haben'ny kitapo fatoriana, azontsika atao koa ny mampiditra akanjo sasany hanaovana kely kokoa ny habaka, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanatsarana ny hafanana. Azontsika atao koa ny manamboatra ny tady amin'ny vavan'ny kitapo fatoriana mba hanatsarana ny hafanana na ny fanaparitahana ny hafanana.
Teo aloha: Fampakaram-bokatra amin'ny ririnina ho an'ny olon-dehibe any an-tokotany 2020
Manaraka: Fivarotana mafana famonoana rano tena tsara kitapo fatoriany tsy misy rivotra ho an'ny mpihaza tafika
2020 Mpanamboatra endrika maivana comfo ...